Kooxdii Jwxo-shiil, oo Ashuun ku Adin Noqotay Afxumo Mooyee – Rasaasa News
Aug 15, 2010 dantii mooge iyo doqon, Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Hal kudhaga sanadkan Jwxo-shiil “ma doonayo in ay nabad ka dhacdo Ogadeeniya waligeed “BBC.” Jwxo-shiil, waxaa weeye ninka dumiyey halgankii ay waday Jwxo, maanlintii oo ay 25 jirsan lahaydna Jwxo way laxaad beeshay laf dhabarta ayeyna ka jabtay.
Waxaan burburkeeda keenay kolkii uu Jwxo-shiil, si qabiil ah badhatamaha Ogadeeniya ugu dilay Dr. M S Dolal oo ahaa ninkii ababiyey isaga ee usha u dhiibay. Ujeedada dilka Dolal, waxay ahayd in uu iibsado qadyada Ogadeeniya, waxaase u soo baxday Jwxo-shiil, in uusan marna iibin karin qadyada uusan waxba ku darsan ee uu qaladaka ku soo galay.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya doqon ma aha, way yaqaanaan ruuxa dantooda wada iyo kan dilaalaya.
Jwxo-shiil, waxaa laggagala hor yimid guluf colaadeed iyo gudumo afaysan, nin abaal gudiwaayey Abaal ma galo, ujeedadiisii guracnayd Jwxo-shiil, gurigii afadiisu kula dhex gamboon yahay.
Ummada Somalida Ogadeeniyana kolkii ay hogaan beeshay, waxay qaadatay wax ayna huraynin oo heshiis nabadeed ayey hoosta ka xariiqday.
Waxaana heshiisyada nabada la hantay Jabhadihii uu horay ugu hujuumay Jwxo-shiil, halgan ay wadeen dartiis isaga oo u adeegsaday xukuumada amarta isaga ee Eritrea.
Jwxo-shiil, arladii oo kaliya laggagama adkaan ee Albaabkiisa hortiisa Ayaan walba shir lagu qabtaa, waxa kaliya ee uu awoodaana waa in uu dambiyo mustaqbal la,aa dhiga galiyo dhalinyarada reer Ogadeeniya ee qurbaha jooga, isaga oo u sheega in ay dagaal ka ridaan meelaha ay Jaaliyaduhu ku shirayaan.
Kooxda Jwxo-shiil, maanta waxay taagan tahay eber, aan xitaa aduunka booqan karin oo irid walba loo taagan yahay.
Jwxo-shiil, waa nuxus aan Ogadeen ka naxaynin nacab walba oo uu Ogadeen leeyahayna wuu garabsan, waxaana uu bilaabay laba arimood;
Jwxo-shiil, waxaa uu bilaabay wakhtigan in uu xidhiidh ka hello beelo aan Ogadeen ahayn, kuwaas oo aan raali ka ahayn nabada ay Ogadeenku u baahan yihiin iyo si uu dib ugu kasbado Ogadeenka, oo uu u yidhaahdo dad Somaliyeed oo aan u dhalan dhulka ayaa taageera halganka [Jeeb-doon iyo Ogadeen dan seeji].
Waxaa kale oo ay xooga isugu geeyeen kooxda Jwxo-shiil, waxa ay ugu yeedheen saxaafada oo ah boggaga Internetka ee ay habeenkii qol mugdiya ku qoraan. Waxaa kaliya oo ay qoraana waa in la caayo masuuliyiinta Jabhadaha heshiiska qaatay, oo aan iyagu kaba warhaynin dhibaatada ciil ee Jwxo-shiil haysata.
Dhurwaa baa ku maahmaahay “nin aan caydheeyey baa i caaya”
Sheekh Maxamed Ibrahin Shakuul, Ganacsade Caan ah oo u Dhashay Dhulka Somalida Ogadeeniya